संस्कारमा समृद्धि र व्यवहारमा क्रान्तिको आवश्यकता – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
संस्कारमा समृद्धि र व्यवहारमा क्रान्तिको आवश्यकता
२०७६ कार्तिक १९, मंगलवार ११:५२ गते
देश बनाउन संकल्प चाहिन्छ । बिनात्याग र प्रतिबद्धता न त घर बन्छ न समाज । अहिले विश्वसँगै नेपाल चरम पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको अभ्यासमा छ । सानो व्यवसायी, मेहनती किसान, स्वच्छ छविका जागिरदारलाई चैनको अवस्था छैन । समाज विकृत हुँदै विषाक्त हुने खतरामा प्रवेश गर्दैछ । वार्डदेखि केन्द्रसम्मले करमार्फत जनताको दोहन गरेको छ । जनता ऋण लिएर व्याज र कर बुझाउन बाध्य छन् । बजारमा मिटरव्याज छापछापती चलेको छ । जनताले दुःख पर्दा ऋण नपाएर बाध्य भएर यस्तो व्याजमा रकम लिन्छन् । तनावग्रस्त ऋणीभित्र अनेक विचलन आउँछ । उसले झन् बढी कमाउनुपर्ने बाध्यतास्वरुप हतारमा निर्णय गर्दा ऊ पनि डुब्छ र त्यस प्रक्रियाबाट अर्कोलाई डुबाइ रहेको हुन्छ ।
१२–१३ प्रतिशत व्याज भनिएता पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार मसान्त, असोज मसान्त, पौष मसान्त भन्दै व्याज असुल गर्छन् । धेरै प्रकारका प्रक्रिया पूरा गर्दा धितो रोक्का, अडिट सेवा शुल्क आदि गर्दा ३० प्रतिशत कटिरहेको छ । यसरी एकथरी इमान बचाएर पनि चर्को व्याजमा मुटु समाएर चल्नु परेको छ । पढाउनुप¥यो, उपचार गर्नुप¥यो, नाना–खाना पूरा गर्नुप¥यो । कमाइ सामान्य छ । ठूला व्यापारीको कमाइ जसरी पनि हुन्छ, नहुनेको कमाइ गुजाराका लागिमात्र पनि धौधौ छ ।
नयाँपन दिने, उद्योगमूलक बनाउने चिन्तन, अभ्यास र समर्थन भएन । अरुले बनाएका सामान किनेर अरुले जे गरेका छन् देखासिखी गरेर व्यवसाय गर्ने बानीले नेपालीको धेरै सामानमा अरबौँ पँुजी फसेको देखिन्छ । सजिलो के भयो भने गाउँमा अलिक मेहनत गर्न परेमा सहर पस्ने, खाडीमा एक सदस्य पठाएर विदेशको सान देखाउने, छोराछोरी पढाउने नाममा कमाइजति लगानी गर्ने अनि ती छोराछोरी पढाएर १२ पूरा हुनासाथ विदेशी भूमिमा गुलाम बन्न पठाउने र रमाउने । राज्यसत्ताले एक व्यक्तिको जीवनमा दसौँ लाख खर्च गर्छ ।
अभिभावकले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा दोब्बर, तेब्बर रकम खर्च गरिरहेका छन् । बच्चालाई हामीले नातेदार, समाज, इष्टमित्र र साथीहरुबाट नजिक राख्दैनौँ । अनि, एकलकाँटे बनाई विदेश पठाउछौँ, त्यसपछि माया र संस्कार खोज्दछौँ । विदेश पढ्न भनेर गएकाहरु मालिक बनेका ५ प्रतिशत भेटिँदैनन् । वर्षौं अरु देशमा नोकर बनेर कमाएको पैसामा अर्कै चलखेल हुन्छ । प्रायःका बाबुआमा सुत्केरी भिसामा भेट्न जान्छन् । अनि, फर्केर आएपछि उनीहरुको कमाइ पनि नलिऊँ जस्तो हुन्छ भन्छन् दुःख देखेर । एकथरी बाँचिरहेका छन्, हाँसिरहेका छन् भने अर्कोथरी बाँचिरहेका छन्, जीवनसँग थाकिरहेका छन् ।
सरकारले श्रमजीवी र जनतासँग समानरुपमा कर लिन्छ । करमा नै विभेद नभई प्रगतिशील कर पनि बन्दैन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र पनि हुँदैन । कर तिर्न पनि सजिलो बनाउन सकेको छैन । राजस्व तिर्दा पनि बिचौलियाको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक व्यापार अति न्यून छ । श्रम निर्यात गरेर सबै चीज आयात गर्ने कोटीमा पुग्नु हामी नेपालीका लागि दुःखी भविष्य निर्माण गर्नु हो ।
जनयुद्धबाट स्थापित नेता प्रचण्डले बारम्बार समाजवाद उन्मुख संविधानलाई उजागर गर्छन् । तर, सुकिलामुकिला प्रवृत्तिलाई न उनले चिर्न सकेका छन् न नेपाली कार्यपद्धतिमार्फत नेपाली जनताले चिरेका छन् । देशमा अचम्मको अराजकता बढेको छ । जनताले जे पनि गर्न हुन्छ, नेताले सब बिगारेका हुन् भनी सराप्ने जनता राजनीतिको र नबुझेझैँ गर्छन् । जिन्दगीभर राजनीतिमा लागेर जीवन बर्बाद पारेकाले होस् वा देशको गरिमामय पदमा बसेकाले होस्, सरकारी कोषबाट उपचार गर्ने प्रचलनलाई पनि अस्वीकार गर्दै उनै सर्वज्ञाता हुन्छन् । सामन्तवादको अवशेष हुनु त स्वाभाविक हो, तर यो प्रवृत्ति बढ्नु वा चिर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । अब जसरी पनि देशलाई सुन्दर र सहजरुपमा लैजानुपर्छ, अहिलेको नेतृत्वले नसके दोस्रो पुस्ता र उसले पनि नसके तेस्रो पुस्तालाई देश हाँक्न आमन्त्रण गर्नुपर्छ ।
देश समृद्ध हुन जनता समृद्ध हुनुपर्छ, सरकार समृद्ध हुनुपर्छ । समाज सभ्य र सुसंस्कारी हुनुपर्छ । सबभन्दा बढी हाम्रो सोचविचार समृद्ध र उदार हुनुपर्छ । दाजुभाइसँग अंशमा लड्ने, बुबाआमालाई सम्पत्तिको आधारमा माया गर्ने, छोराछोरीलाई नामभन्दा दामको आधारमा नजिक बनाउने, समाजमा भ्रष्टाचारीको हाईहाई, दलालीको दबदबा हुँदा पनि सरकारलाई रातदिन सराप्नेले वर्षको एकदिनको ज्याला राज्यले मागेमा अझ धिक्कार्ने प्रवृत्ति नै दोषी छ । छिमेकीसँग एक–आधा बित्ता जग्गामा जुनीभर नबोल्ने, समाजसेवाको खबर थाहा नपाउने, खाने खबर नभने पनि थाहा पाउने अर्को प्रकारको दरिद्रता हो ।
आफ्नो घरअगाडि सफा गर्न नसक्ने सहरिया प्रशस्त पाइन्छन्, जसले दोष अरुलाई लगाएर उम्कन खोज्छ । उनीहरु असभ्य नै हुन् र फोहोर गरेर आफू सफा बन्ने अझ नीच सोच हो । यो सोचमा परिवर्तन नआई हामी समाजवादतिर लम्कन सक्दैनौँ । काम गरिरहने छायामा पर्ने र टपरटुइयाँहरु सफल हुने प्रवृत्ति हाबी भएमा मानिसमा नैराश्यता बढ्छ । उधारो लिएर नतिर्ने, तिर्नै परे दारा किट्ने बानी पनि हामीभित्र छ ।
सामाजिक सञ्जाल, टिभी, मोबाइलका विकृतिले पनि अहिले उत्पादकत्व क्षमता वृद्धिमा ठूलो अवरोध खडा गरेको पाइन्छ । पत्रकारले प्रम, राष्ट्रपति र आफ्नै बाबाआमालाई पनि तपाईं भन्न जान्दैनन् भनी प्रधानमन्त्रीबाट नै दुःख व्यक्त गरिनुपर्ने अवस्था आफैँमा लाजमर्दो संस्कार हो । ऋषिमुनिका पालाको संस्कार धेरै उत्तम र आनन्दमय हुन् कि भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त विचार आफैँमा खोजमूलक छ । देशमा संस्कार, सभ्यता र आफ्नै पहिचानरुपी संस्कृतिको विकास नभई देश विकास हुँदैन र देश विकास नभई समृद्ध देश बन्दैन ।
एनसीएलजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कर्मचारी, नेता र न्यायाधीशसम्म किनेर ६३ अरब कर तिर्न नपर्ने गराउँछन् । यता, सरकारी कर्मचारी बनेर खरबौँ सम्पत्ति भएको नेपाल टेलिकमले एनसीएलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेझैँ गर्नु आफैँमा रहस्यमय छ । उसको सेवा विस्तार गति, सेवामा गुणस्तर खोइ ? के नेपालजस्तो देशमा एउटा सार्वजनिक संस्थानकै रुपमा पूरा जनतालाई सेवा दिन नसक्ने हो त ? अवश्य होइन, यसलाई कमजोर बनाइदिएबापतको बोनस अरु प्रतिस्पर्धी कम्पनीबाट सीमित व्यक्तिलाई मिलेकै हुनुपर्छ । देश बनाउने जिम्मा सबैको हो, त्यसभन्दा बढी राष्ट्रसेवकको पगरी गुथेका कर्मचारीको हुनुपर्नेमा सबै अस्थायी सरकारका नेतामा सारेर उम्कने अवस्थाको अन्त गरिनुपर्छ । संस्कार सबैले व्यवहारमा नै प्रयोग गर्नुपर्छ ।